Coliseum : hajanona ilay seho goavana tokony hataon’i Rossy | NewsMada
Coliseum : hajanona ilay seho goavana tokony hataon’i Rossy
Efa nomanina ela, kanefa voatery foanana. Tsy raikitra indray ilay sehon’i Rossy ao amin’ny Coliseum. Noho ny fisian’ny fety iray maimaimpoana eo anoloan’ny daty voatondro ny antony.
Tsy faly kanefa nandefitra i Rossy… Araka ny fanambarana nataony omaly, voatery foanana ilay fampisehoana tokony hotontosainy ny 1 mey izao, etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe. Daty efa azo nialoha, ary efa nambarany tamin’ny vao nanomboka ny fankalazana ny faha-10 taon’ny miRitsoka Production sy ny faha-30 taon’ny Pro Rossy io.
« Misy fety maimaimpoana eo anoloan’ilay daty, ankoatra ny fampisehoana iray. Misy fara faharatsiny roa andro anefa mametraka ireo fitaovana fotsiny ary tsy ao anatin’izany ny fanandramana ny feo, ny jiro ary ny afomanga”, hoy ny nambaran’i Rossy.
Nanamafy izany ny mi’Ritsoka Production, izay tokony hisahana ny lafiny teknika sy ny fikarakarana. “Efa nifanaraka izahay sy ny mpikarakara ilay seho hataon’i Dadi Love ny 29 avrily. Tsy nisy olana mihitsy satria ny fanamafisam-peonay ihany no hampiasain’izy ireo. Tampoka teo anefa, misy an’io fety hafa io eo aloha, izay tsy izahay no miandraikitra azy. Tsy misy azo hatao afa-tsy ny mandefitra sy manafoana ny anay…”, hoy ny nambaran’ny tompon’andraikitra.
Tsiahivina fa tsy maintsy vitaina mialoha ny famandrihana ny Coliseum, ho an’ireo mpikarakara mihevitra ny hampiasa ny toerana. Tsy vitan’izay fa misy ny antsapaka hatao, amin’ireo maromaro mitady ny daty tsara. Any amin’ny fiadidiana ny Repoblika no hatao ny fangatahana ary io sampan-draharaha io no mijery ny fetezany na tsia. Araka izany, tsy tokony hisy ny daty mifanakaiky, raha tsy misy fifanarahana eo amin’izay nahazo daty voalohany, satria mila farafaharatsiny 3 andro ny fametrahana ny fitaovana ilaina.
Mipetraka hatrany ny ahiahin’ny rehetra, na tsy nanambara izany mivantana aza ny mpanakanto sy ny mpikarakara: sao misy ambadika politika indray?